Rongedza: Paiva Nechinetso Kuchera Mamwe Mafaira Mafaira MuMedia Creation Tool
Media Creation Tool, chibvumirano chepamutemo chinoita kuti iwe rodha razvino Windows 10 ISO kubva kuMicrosoft kazhinji dzinotora ISO mafaira pasina nyaya.
Zvisinei, pane dzimwe nguva, unogona kuwana mhosho paunenge uchitsvaga ISO image file. Iko kukanganisa "Paiva nechinetso chekutora mamwe mafayela. Hatina kukwanisa kutora zvose zvese zvakakodzera mafaira. Chengetedza kuti uone kuti wakabatana neIndaneti uye edza kushandisa chimbo zvakare. Nzira yekutadza: 0x80072EE7 - 0x90018".
Kana iwe uri kuwanawo ikokanganisa pamusoro apa paunenge uchitsvaga Windows 10 ISO chifananidzo, unogona kushandisa mazano anotevera kuti utore mufananidzo we ISO usina kukanganisa.
Solution 1 ye6
Edza kushanda Media Creation Tool zvakare
Kana uine iko kukanganisa pawakaedza kuikwanisa ISO kokutanga, tapota edza kushandisa chimbo zvakare. Kazhinji kacho kupfuura, kushandisa Media Creation Tool zvakare kunogadzirisa nyaya yacho.
Solution 2 ye6
Iva nechokwadi chokuti uri kutamba iyo itsva Media Creation Tool
Microsoft inodzokorora Media Creation Tool nokukurumidza mushure mekunge yakabudisa shanduro yezvinhu Windows 10. Kana iwe uri kutungamirira Media Creation Tool yakakodzwa nguva yakadzoka, tapota teerera shanduro yezvino ye Media Creation Tool nekushanyira peji ino yeMicrosoft uye runomhanya zvakare.
Uyezve, zvinogona kuitika kuti Media Creation Tool inofambisa iyo yakaora. Saka, tapota teerera ikopi itsva yepurogiramu uye itairi zvakare.
Solution 3 ye6
Tarisai kana internet yako yekutengesa yakasimba
Dzimwe nguva, kukanganisa kunowoneka kana PC yako iri nyore kurasikirwa nekutengesa internet. Ndiyo pfungwa yakanaka yekuita kuti hutano hwetaneti husimbiswe tisati tashandisa chigadziri zvakare.
Kana uine chero nyaya dzekubatanidza yekombiyuta, tsanangurira kurudyi pane network network muyata yemaitiro yebharina rebasa uye ipapo chengetedza Troubleshoot zvinetso zvako kusarudza yakagadzirirwa mune network network troubleshooter kuti uone kushungurudza kwenhamba.
Solution 4 ye6
Tarisa kana disk yako ine nzvimbo yakakwana yekusununguka
Kazhinji pane zvisiri, tinokanganwa kutarisa nzvimbo inowanikwa diski pane motokari tisati tatanga kutora faira huru. The Windows 10 32-bit ISO iri pedyo ne3 GB muhukuru, uye 64-bit ISO i3.6 GB. Saka, iva nechokwadi chokuti motokari yaunenge uchiedza kuchengetedza mufananidzo weIO ine zvishoma 4 GB yeharaunda disk space.
Solution 5 ye6
Shandisa imwe yakasiyana USB drive
Kana uine mhosho pawakasarudza yako USB drive kuti uchengetedze mufananidzo we ISO, tapota edza kusarudza imwe USB drive kana kusarudza nzvimbo mukati memotokari yako yePC yako sezvo USB drive ingave yakakonzera kana kunyora kudzivirirwa.
Solution 6 ye6
Manually download the ISO kubva ku Microsoft
Unogona kukopa Windows 10 ISO kubva kuMicrosoft pasina kushandisa Media Creation Tool zvakare. Ndapota fungai mazano ari kwatiri sei download Windows 10 ISO kunze kweMedia Creation Tool chinyorwa chekutora-nhanho nhungamiro.
Nzira Yokushandisa Rupus Kuti Udzidze Windows 10 ISO
Filed Under: Computer file